BEFANDRIANA AVARATRA : Namoy ny ainy omaly ihany koa ilay Kaomandin’ny Borigady naratra mafy
Taorian’ ilay fanafihana goavana nahaverezan’ny volan’ireo Sinoa mitentina 60 tapitrisa Ariary sy naharatrana fokonolona maro tany Befandriana Avaratra, ny alahady faha 28 jolay 2019 lasa teo dia fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaray farany indray, omaly alarobia, fa namoy ny ainy koa ilay Zandary Kaomandin’ny Borigady naratra mafy. 8 août 2019
Tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany antoandro tao amin’ny Hopitaly Soavinandriana Antananarivo no tapitra ny ainy. Nanao ny ala nenina rehetra ny mpitsabo saingy tsy tana intsony ny ain’ ity farany. Raha tsiahivina dia ny 1 aogositra lasa teo ihany koa no nodimandry ilay Ben’ny tanàna niaraka notsaboina taminy noho ny ratra nahazo azy ireo nandritra ny fifanjevoana.
Amin’ny anakapobeny, efa mba miverina amin’ny laoniny ny filaminana any ana-toerana ankehitriny. Jiolahy iray kosa no fantatra fa efa voasambotra, izay voalaza fa isany nandray anjara tamin’ny fanafihana mahery vaika. Eo am-panohizana ny famotorana hatrany ny mpitandro filaminana hatreto. Manao ny ezaka rehetra hanatratrarana ireo olon-dratsy izy ireo ankehitriny.